I-Aiteannach-indlu entsha enamagumbi amabini okulala kwi-croft
Invergarry, Highlands, United Kingdom
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnna
Yiza uzophumla kule ndlu imnandi nenesitayile esandula kwakhiwa. Yakhelwe ngabamkeli abahleli kule ndawo iminyaka eliqela, eli khaya litsha (lagqitywa ngo-Okthobha ngo-2021) libonelela ngemibono emangalisayo kunye nokuzola kodwa kukuhambo olufutshane lwemizuzu elishumi ukuya kwilali yase-Invergarry. Le ndlu inobushushu obuphantsi komhlaba, isilingi evalelekileyo kwindawo yokuhlala evulekileyo, iglazing kathathu, isitovu esibaswa ngamaplanga, indawo egqunyiweyo yepatio enemibono ethandekayo kunye negadi yabucala (ephantsi kophuhliso).
Le propathi isandula ukwakhiwa kumgangatho ophezulu kakhulu kunye neglazing kathathu kuyo yonke indawo kunye nokufudumeza ngaphantsi. Ukulungiswa, ukufakwa kunye neefenitshala ezininzi zintsha kraca kunye nezixhobo zodidi oluphezulu kunye nezakudala.
Amagumbi okulala amabini ngasemva kwepropathi- enye iphindwe kabini kunye newele elinye, omabini anewadilophu ezifakelwe ezinezipili ezigcweleyo. Ubuphofu bamaRoma kwiifestile ezintathu ezikhazimlayo ze-aluminium. Iitawuli ezithambileyo ezimhlophe zinikezelwe. Umosi wenwele.
Ipaseji enkulu enendawo eninzi yokugcina iidyasi, iibhutsi kunye nezixhobo zangaphandle.
Izindlu zamagumbi okuhlambela (ikhabhathi ezakhiwe ngenjongo) umatshini wokuhlamba impahla/isomisi, izinto zeentsana ezifana neembiza kunye nesitulo esiphakamileyo, i-ayina nebhodi yoku-ayina kunye ne-airer yempahla. Ishawari yemvula phezu kwebhafu kunye nesinki enendawo yokugcina engamampunge.
Ngaphambili kwepropathi kukho indawo yokuhlala yesilingi evaliweyo enendawo yokuhlala, iTV ehlakaniphile kunye nekhitshi kunye nendawo yokutyela. Isitulo seVelvet kunye nesofa kunye nesitovu sokutshisa iinkuni zibonelela ngesithuba esimangalisayo sokuphumla kunye nokuphumla. Iipaneli ezilungisiweyo zeglasi zivumela ukujonga kunye nokukhanya kwandiswe. Iingcango zepatio ezibanzi eziimitha ezi-3 zikhokelela kwindawo evulekileyo yepatio yeziselo zangokuhlwa okanye ii-BBQs.
Lo mhlaba umi kwi-croft (ifama encinci) kwaye ijikelezwe ngamasimi kunye nemithi kwaye ibuyiselwe umva kwindlela enye enendawo yokupaka yabucala kunye negadi.
43" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Apple TV, I-Chromecast, I-Disney+, I-Netflix, I-Roku
Isiseko esifanelekileyo sokuhlola iindawo eziphakamileyo-iikhilomitha ezisi-8 kuphela ukusuka elunxwemeni lweLoch Ness kwaye ikufuphi neGreat Glen Way. I-Invergarry isendleleni eya kwiSiqithi saseSkye kwaye ingaphezulu nje kweyure ukuya e-Inverness. Ilungele ukuhamba endulini, ubusika kunye nemidlalo yasemanzini, ukuqubha endle kunye nokutyelela izikhumbuzo zembali ezifana neenqaba ze-Eilean Donan kunye ne-Urquhart.
Indlu ifumana igama layo kwindawo eyaziwa ngokuba yijuniper - iAiteannach yiGaelic 'indawo apho umjunipha ukhula'.
Siyafumaneka ukuze siphendule nayiphi na imibuzo onokuba unayo kodwa sikwaqaphela ukubaluleka kobumfihlo bakho ngelixa useholideyini.